Ihe Ga-eme Ka Ịgụ Baịbụl Na-atọkwu Gị Ụtọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ịgụ Baịbụl ọ̀ na-atọ gị ụtọ, ka ọ̀ na-agwụ gị ike? Nke ọ bụla ọ bụ nwere ike ịbụ n’ihi otú i si na-agụ ya. Ka anyị leba anya n’ihe ndị ga na-eme ka ịgụ Baịbụl na-agụ gị agụụ, ma na-atọkwu gị ụtọ.
Jiri Baịbụl a sụgharịrị nke ọma na nke e ji asụsụ a na-ede n’oge a na-agụ ya. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ, gụta ọtụtụ okwu na-esiri gị ike ịghọta, ma ọ bụkwanụ okwu ndị mgbe ochie ị na-amaghị ihe ha pụtara, akwụkwọ ahụ nwere ike ịgbụ gị. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ka ị chọta Baịbụl e ji asụsụ dị mfe ga-eru gị n’obi sụgharịa. O kwesịkwara ịbụ nke a sụgharịrị nke ọma. *
Danloduo ya n’ekwentị na ihe ndị yiri ya, ma ọ bụ gị ana-agụ ya n’Ịntanet. N’oge anyị a, e nwere Baịbụl ndị e biri ebi, nweekwa ndị nke dị n’Ịntanet, kọmputa, ekwentị na ihe ndị yiri ya. E nwekwara ihe ndị dị na kọmputa ma ọ bụ n’ekwentị ụfọdụ nwere ike inyere gị aka ịchọta amaokwu Baịbụl ndị ọzọ kwuru banyere ihe ị na-agụ. Ha nwekwara ike inyere gị aka ịhụ otú e si sụgharịa amaokwu ị na-agụ ná nsụgharị Baịbụl ndị ọzọ. E nwekwara Baịbụl ndị a gụrụ agụ i nwere ike igere egere. Ụfọdụ na-egere ya ma ha nọrọ n’ụgbọala na-eme njem, ma ha na-asa ákwà, ma ọ bụkwanụ na-eme ihe ndị ọzọ. Leenụ ma ò nwere nke ọ bụla n’ime ụzọ ndị a ga-akara gị mma isi gụọ Baịbụl.
Jiri ihe ndị e ji amụ Baịbụl na-agụ Baịbụl. E nwere ihe ndị e ji amụ Baịbụl nwere ike inyere gị aka ịghọtakwu Baịbụl ị na-agụ. Otu n’ime ha bụ map ndị na-egosi obodo ndị e kwuru okwu ha na Baịbụl. Ha nwere ike inyere gị aka ịmata ebe ihe ndị ị na-agụ mere, meekwa ka ị ghọtakwuo ihe ị na-agụ. Isiokwu ndị gbara n’akwụkwọ anyị ụfọdụ dị ka ndị dị n’Ụlọ Nche a nwere ike inyere gị aka ịghota ọtụtụ ihe e kwuru na Baịbụl. E nwekwara ndị dị na jw.org/ig, n’ebe e dere “Ihe Baịbụl Na-akụzi.”
Gbanwee otú i si na-agụ ya. Ọ bụrụ na isi n’isi gụrụ Baịbụl ruo ná ngwụcha na-esiri gị ike, i nwere ike ịmalite n’akwụkwọ Baịbụl ndị kacha atọ gị ụtọ. Ị chọọ ịmatakwu ụfọdụ ndị a na-anụkarị aha ha na Baịbụl, i nwere ike malite ịgụ gbasara ha. E nwere igbe dị n’isiokwu a nwere ike inyere gị aka ma ị chọọ ịgụ gbasara ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl. Isiokwu ya bụ “ Gụọ Gbasara Ndị A Kọrọ Akụkọ Ha na Baịbụl Ka Ị Ghọtakwuo Baịbụl.” I nwekwara ike ịgụ Baịbụl n’isiokwu n’isiokwu ma ọ bụ otú ihe ndị a kọrọ na ya si mee. Gbalịa mee otu n’ime ihe ndị a ka ịgụ Baịbụl na-atọkwu gị ụtọ.
^ para. 4 Ọtụtụ ndị achọpụtala na a sụgharịrị Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ nke ọma, nakwa na ọ dị mfe ọgụgụ. Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. Ọ dịkwa n’ihe karịrị asụsụ otu narị na iri atọ. I nwere ike ịdanlodu ya na jw.org/ig ma ọ bụkwanụ na JW Library app. Ị chọọkwa nke e biri ebi, Ndịàmà Jehova nwere ike iwetara gị ya n’ụlọ gị.
GỤỌ GBASARA NDỊ A KỌRỌ AKỤKỌ HA NA BAỊBỤL KA Ị GHỌTAKWUO BAỊBỤL
Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị fere Chineke
1 Samuel isi nke 25
Esta isi nke 2-5, 7-9
1 Samuel isi nke 1-2
(Nne Jizọs) Matiu isi nke 1-2; Luk isi nke 1-2; gụọkwa Jọn 2:1-12; Ọrụ Ndịozi 1:12-14; 2:1-4
Jọshụa isi nke 2, 6; gụọkwa Ndị Hibru 11:30, 31; Jems 2:24-26
Jenesis isi nke 24-27
Jenesis isi nke 17-18, 20-21, 23; gụọkwa Ndị Hibru 11:11; 1 Pita 3:1-6
Ụfọdụ ụmụ nwoke ndị fere Chineke
Jenesis isi nke 11-24; see also 25:1-11
1 Samuel isi nke 16-30; 2 Samuel isi nke 1-24; 1 Ndị Eze isi nke 1-2
Oziọma Matiu, Mak, Luk, na Jọn
Ọpụpụ isi nke 2-20, 24, 32-34; Ọnụ Ọgụgụ isi nke 11-17, 20, 21, 27, 31; Diuterọnọmi isi nke 34
Jenesis isi nke 5-9
Ọrụ Ndịozi isi nke 7-9, 13-28
Matiu isi nke 4, 10, 14, 16-17, 26; Ọrụ Ndịozi isi nke 1-5, 8-12
IHE NDỊÀMÀ JEHOVA NWERE E JI AMỤ BAỊBỤL
JW.ORG—Ọ bụ ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet. Ọtụtụ ihe e ji amụ Baịbụl dị na ya. E nwere ebe a na-akpọ “Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara.” E nwekwara ebe e dere otú ị ga-esi danloduo JW Library app
‘Ka Anyị Hụ Ezi Ala Ahụ’—Broshọ a, nwere map na foto ebe dị iche iche a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl
Insight on the Scriptures (Bekee)—Akwụkwọ a kọwara ebe ndị a kọrọ akụkọ ha na Baịbụl, kọwaakwa okwu ndị dị na Baịbụl na ndị e kwuru gbasara ha na Baịbụl. O nwere nke mbụ na nke abụọ
“All Scripture Is Inspired of God and Beneficial” (Bekee)—Akwụkwọ a kwuru mgbe e dere akwụkwọ Baịbụl nke ọ bụla, ebe a nọ dee ya, na ihe mere e ji dee ya. Ọ kọwatụrụ ihe dị n’akwụkwọ Baịbụl nke ọ bụla
The Bible—God’s Word or Man’s? (Bekee)—Akwụkwọ a dị obere. A sara anya na mmiri dee ya. Ihe ndị e dere na ya na-egosi n’eziokwu na e si n’ike mmụọ nsọ dee Baịbụl
Baịbụl—Gịnị Ka Ọ Na-ekwu?—Akwụkwọ a dị peeji iri atọ na abụọ. Ọ kọwara isi ihe Baịbụl na-ekwu
Nke 1 n'Afọ 2017 | Olee Ihe Ị Ga-eme Ka Ịgụ Baịbụl Na-atọ Gị Ụtọ?
ỤLỌ NCHE Nke 1 n'Afọ 2017 | Olee Ihe Ị Ga-eme Ka Ịgụ Baịbụl Na-atọ Gị Ụtọ?